We She Me: မစားကောင်းတဲ့ အစာ
လူတွေ အပေါ် ဘေးဆိုးတွေ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အစာ တစ်မျိုးကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဖော်ထုတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအစာကို တစ်ခါ စားရုံနဲ့ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်း များစွာ အာနိသင်ဆိုးက ကျန်နေဦးမှာပါ။ စားမိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ စိတ်ဂနာမငြိမ် ဖြစ်ခြင်း၊ အမျိုးသားတွေဟာ ပြင်းထန်သော စိတ်ဝေဒနာ ဖိစီးမှုရခြင်း၊ စိတ်ကျဉ်းကျပ်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေပါတယ်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး မရွေး စိတ်ဓါတ် အကြီးအကျယ်ကျခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ အစာကိုတော့ Wedding Cake လို့ ခေါ်ပါသတဲ့။
Anonymous - 1/31/08, 12:31 PM
I am going to get married soon and i will be having the same disease for eating that cake.
Andy Myint - 1/31/08, 11:25 PM
You then still have time to think again. Hope you wont regret later. :D Just kidding. All the best to your wedding.
Anonymous - 10/21/08, 10:12 PM
Just skip the cake and eat some other else
Andy Myint - 10/21/08, 10:25 PM